Green Computing ဆိုတာဘာလဲ?
Green Computing ဆိုတာကတော့ ကွန်ပျူတာလိုမျိုး အီလက်ထရောနစ်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းတွေကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုရုံသာမက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Green Computing ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့၊ ပစ္စည်းရဲ့ထုတ်ကုန်သက်တမ်းအတွင်းမှာ အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ဖို့၊ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခဲ့ရင်လည်း ပြန်လည်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် အသုံးမပြုတော့တဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနှင့် စက်ရုံတွေကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို သဘာဝအတိုင်းဆွေးမြေ့ပျက်စီးစေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Green Computing ရဲ့ သင်ခန်းစာ‌တွေမှာဆိုရင်တော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ကောင်းမွန်တဲ့ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စွန့်ပစ်နိုင်‌ရေးနဲ့ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုရေးနည်းစနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
Green Computing သဘောတရားတွေကို တတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက် ၄ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ -
(က) Green Use (ခ) Green Disposal (ဂ) Green Design (ဃ) Green Manufacturing တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Green Computing ရဲ့ကောင်းကျိူး ဆိုးကျိူးတွေကို ထပ်မံဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ RecyGlo Myanmar Page ကို See First လုပ်ထားပြီး E-Waste Recycling အကြောင်းစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Green computing is the study and practice of using computing resources efficiently and eco-friendly. The goals are that is reduce the use of hazardous materials, maximize energy efficiency during the product's lifetime, and promote recyclability or biodegradability of defunct products and factory waste. Green IT practices include the development of environmentally sustainable production practices, energy-efficient computers, and improved disposal and recycling procedures.
To promote green computing concepts at all possible levels, the following four complementary approaches are employed:
(1) Green Use (2) Green Disposal (3) Green Design (4) Green Manufacturing
We will continually post about E-Waste from our Facebook and Website. Hence, don't hesitate to click "See First" of our Facebook page, and learn and read on our E-Waste content and information we share.